သုတ်လွှတ်စောခြင်း သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ချိန်သားကိုက်မှုဆိုသည်မှာ ချစ်မှုရေးရာတွင် အဓိက အခရာပင်ဖြစ်သည် ။
နှစ်ဦး နှစ်ဖက် လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝခြင်းဆိုတဲ့ orgasm ဟာ အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်စောလေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဖြစ်နည်းလေ့ရှိပါတယ် ။ နှစ်ဦးလိင်စိတ်အထွဋ်အထိပ်မရောက်မီ အချိန်စော၍ ကိစ္စပြီးမြောက်သွားသာ အခါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်ကျေနပ်မှုမရဘဲ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ထိုကဲ့သို့အခြေအနေကို သုတ်လွှတ်စောခြင်း ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း ( premature ejaculation ) လို့ခေါ်ပါတယ် ။
သုတ်လွှတ်စောခြင်း ၊ မြန်ခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ?
လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ဘယ်အချိန် ပြီးမြောက်သင့်တယ်ဆိုသော သတ်မှတ်ချက် မရှိသော်လည်း လိင်မဆက်ဆံရသေးမှီ သို့မဟုတ် ဆက်ဆံပြီး တစ်မိနစ် မပြည့်မီအတွင်း ပြီးမြောက်သွားခြင်းကို သုတ်လွှတ်စောခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် ။
ဒါဟာ ပြသနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘသင့်အနေနဲ့ ဆက်လက်ပြီး လိင်ဆက်ဆံနိုင်ဖို့အတွက် ကျားအင်္ဂါဟာ တင်းမာမှုမရှိတော့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သင်ရော သင့်ပါတနာဟာ လုံလုံလောက်လောက် ပြည့်ဝမှုကို မခံစားရတော့ပါဘူး ။
သုတ်လွှတ်စောခြင်း မြန်ခြင်းဟာ အဖြစ်များလေ့ရှိပြီး လူပျိုများတွင် အဖြစ်များပါတယ် ။ ၃၀ ကနေ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် အမျိုးသားတွေရဲ့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ဖြစ်ပွားတဲ့အခါ အရမ်းကြီး စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး ။
အကြောင်းရင်းတိတိပပမရှိသေးသော်လည်း အဓိက စိတ်အခြေအနေအပေါ်အများကြီး မူတည်ပါတယ် ။
* အပြစ်ရှိသလို ခံစားမိနေတာ
* နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးပြသနာတွေရှိနေတာတွေကြောင့်လဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
တစ်ခါတစ်ရံ ကျားအင်္ဂါ မတင်းတောင့်နိုင်တော့ခြင်းဆိုသော ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ( erectile dysfunction) ကြောင့်လဲ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ကျားအင်္ဂါဟာ လုံလောက်သော အချိန်ထိ မတောင့်တင်းနိုင်သောကြောင့် စိုးရိမ်တကြီးဖြင့် ပြီးမြောက်အောင် အလျင်စလို လွှတ်မိတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပန်းသေးပန်းညှိုးရောဂါကိုကုသခြင်းဖြင့် သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ် ။
လိင်မဆက်ဆံမီ သင့်စိတ်ကို အလောတကြီး ကြောင့်ကြမှုမရှိဘဲ လျှော့ချထားခြင်း ပြီးမြောက်ခါနီး အထွဋ်အထိပ်ချိန်တွင် အာရုံကို လွှဲပြောင်းပစ်ခြင်းတို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။
ထို့အပြင် ကွန်ဒုံ သုံးပေးခြင်းဖြင့် ထိတွေ့မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အချိန်ကြာစေနိုင်ပါတယ် ။
ဗိုင်ယာဂရာနှင့် အလားတူဆးများ ၊ ဈေးကွက်အတွင်းကြော်ငြာနေသောဆေးများ သောက်သုံးမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှသာ သောက်သင့်ပါတယ်
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါသလဲ ?
အကယ်၍ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းဟာ သင်ရော သင့်ပါတနာအတွက်ပါ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာလျှင် သွားရောက်ပြသသင့်ပါပြီ ။ ထို့အတွက် ဆရာဝန်မှ စမ်းသပ်ခြင်း ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်း သင်နှင့်သင့်ပါတနာကြား ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ အစရှိသိတို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီး ကုသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ထို့အပြင် စိတ်ကျဝေဒနာ စိတ်ဖိစီးမှုများ သင်နှင့်သင့်ပါတနာအကြား ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲများ ပြသနာများအတွက်ကိုလဲ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန် ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ကုသမှုကို ခံယူနိုင်ပါတယ် ။